ချန်ပီယံအသင်းသစ်ထွက်ပေါ်လာဖို့ရှိနေတဲ့ ယူရို-၂၀၂၀ပြိုင်ပွဲ |
ဇွန်လ(၁၁)ရက်ကနေ စတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ယူရို-၂၀၂၀ပြိုင်ပွဲဟာ အခုဆိုရင် ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ပွဲတွေအားလုံးကစားပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ လာမယ့်သောကြာနေ့မှာ ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲတွေ စတင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယူရိုလက်ရှိချန်ပီယံပေါ်တူဂီအသင်းဟာ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်မှာ ဘယ်လ်ဂျီယံကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် ပြိုင်ပွဲကထွက်ခဲ့ရပြီဖြစ်သလို ဗိုလ်စွဲဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့ ပြင်သစ်အသင်းဟာလည်း ဆွစ်ဇာလန်ကို မထင်မှတ်ဘဲ အရေးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက် ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်နဲ့ပဲ ကျေနပ်ခဲ့ရပါပြီ။
အခု ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေထဲမှာ ချန်ပီယံဟောင်းတွေအဖြစ် စပိန်၊ အီတလီ၊ ဒိန်းမတ်တို့ (၃)သင်းသာကျန်တော့ပြီး ကျန်တဲ့(၅)သင်းက ယူရိုပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် တစ်ခါမှ ဗိုလ်မစွဲဖူးသေးပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်လုပွဲသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရ ဒီနှစ် ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံအသင်းသစ်ထွက်ပေါ်လာမယ့်အနေအထားမျိုးရှိနေပါပြီ။
၁၉၆၈ ပြိုင်ပွဲတုန်းက ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ အီတလီအသင်းဟာ လာမယ့်ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ ဆုံတွေ့နေပြီး၊ ၁၉၆၄နဲ့ ၂၀၀၈၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွေမှာဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ စပိန်အသင်းကတော့ ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာပါ။
ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ဘယ်လ်ဂျီယံ-အီတလီပွဲက နိုင်တဲ့အသင်းနဲ့ စပိန်-ဆွစ်ဇာလန်ပွဲက နိုင်တဲ့အသင်းဆုံတွေ့မှာဖြစ်လို့ ချန်ပီယံဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ အီတလီနဲ့စပိန်နှစ်သင်းထဲက တစ်သင်းကတော့သေချာပေါက် ပြိုင်ပွဲကထွက်ရမှာဖြစ်ပြီး ကံဆိုးရင် နှစ်သင်းစလုံးထွက်သွားရမယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်။
ဒီဘက်လမ်းကြောင်းမှာတော့ ချန်ပီယံဖြစ်ဖူးတာက ယူရို-၉၂ ချန်ပီယံဒိန်းမတ်တစ်သင်းသာရှိပြီး ကျန်တဲ့အသင်းတွေထဲမှာ အောင်မြင်မှုအများဆုံးဆိုလို့ ချက်တစ်သင်းသာရှိပါတယ်။
ချက်အသင်းဟာ အရင် ချက်ကိုဆလိုဗက်ကီးယားနာမည်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့စဉ်က ၁၉၇၆ ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့ဖူးပြီး အခု ချက်အသင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ချိန်မှာ တစ်ခါမှ ဗိုလ်မစွဲခဲ့သလို အမြင့်ဆုံးက ယူရို-၉၆ ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်အထိတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်အသင်းကတော့ ယူရိုပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ တစ်ခါမှတောင် ဗိုလ်လုပွဲမတက်ဖူးသေးပါဘူး။
ယူကရိန်းဆိုရင်လည်း အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် အခုမှ ပထမဆုံးအကြိမ်ကွာတားတက်ခဲ့တာပါ။
တကယ်လို့ ယူရိုချန်ပီယံဟောင်းအသင်းစာရင်းမှာ ချက်အသင်းကို ထည့်တွက်ရင်တောင် ဒိန်းမတ်နဲ့ချက်အသင်းတို့ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ
ဆုံတွေ့နေလို့ တစ်သင်းတော့ ယူရိုပြိုင်ပွဲကို သေချာပေါက်လက်ပြနှုတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ အင်္ဂလန်နဲ့ ဆုံတွေ့ဖို့များနေပါတယ်။
ယူရို-၂၀၂၀ ဆီမီးဖိုင်နယ်နဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတွေကို ဝင်ဘလေကွင်းမှာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် အင်္ဂလန်အသင်းကတော့ ဗိုလ်လုပွဲသွားရာလမ်းကြောင်း ချောင်နေတဲ့အတွက် ချက်နဲ့ဒိန်းမတ်တို့ထဲက ဘယ်အသင်းတက်တက် အင်္ဂလန်အတွက် သိပ်မခက်ခဲပါဘူး။
လမ်းကြောင်းအနေအထားအရ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ချန်ပီယံဟောင်းနှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့က ရာနှုန်းနည်းပါးနေပြီး ချန်ပီယံဟောင်းတစ်သင်းနဲ့ ချန်ပီယံမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့ တစ်သင်းဆုံတွေ့မယ့်အခြေအနေပိုများပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ယူရို-၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံအသင်းသစ်ပေါ်ထွက်လာမလား . . .
ဒါမှမဟုတ် ချန်ပီယံဟောင်းတွေထဲက တစ်သင်းပဲဗိုလ်စွဲမလားဆိုတာ ရင်ခုန်စွာနဲ့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
ဇြန္လ(၁၁)ရက္ကေန စတင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ယူ႐ို-၂၀၂၀ၿပိဳင္ပြဲဟာ အခုဆိုရင္ ရႈံးထြက္(၁၆)သင္းအဆင့္ပြဲေတြအားလုံးကစားၿပီးသြားၿပီျဖစ္လို႔ လာမယ့္ေသာၾကာေန႔မွာ ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲေတြ စတင္ကစားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယူ႐ိုလက္ရွိခ်န္ပီယံေပၚတူဂီအသင္းဟာ ရႈံးထြက္(၁၆)သင္းအဆင့္မွာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံကို ရႈံးနိမ့္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲကထြက္ခဲ့ရၿပီျဖစ္သလို ဗိုလ္စြဲဖို႔ေရပန္းစားေနတဲ့ ျပင္သစ္အသင္းဟာလည္း ဆြစ္ဇာလန္ကို မထင္မွတ္ဘဲ အေရးနိမ့္ခဲ့တဲ့အတြက္ ရႈံးထြက္(၁၆)သင္းအဆင့္နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ခဲ့ရပါၿပီ။
အခု ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္ကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့အသင္းေတြထဲမွာ ခ်န္ပီယံေဟာင္းေတြအျဖစ္ စပိန္၊ အီတလီ၊ ဒိန္းမတ္တို႔ (၃)သင္းသာက်န္ေတာ့ၿပီး က်န္တဲ့(၅)သင္းက ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ခါမွ ဗိုလ္မစြဲဖူးေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္လုပြဲသြားတဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြအရ ဒီႏွစ္ ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲမွာ ခ်န္ပီယံအသင္းသစ္ထြက္ေပၚလာမယ့္အေနအထားမ်ိဳးရွိေနပါၿပီ။
၁၉၆၈ ၿပိဳင္ပြဲတုန္းက ဗိုလ္စြဲခဲ့တဲ့ အီတလီအသင္းဟာ လာမယ့္ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္မွာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံနဲ႔ ဆုံေတြ႕ေနၿပီး၊ ၁၉၆၄နဲ႔ ၂၀၀၈၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေတြမွာဗိုလ္စြဲခဲ့တဲ့ စပိန္အသင္းကေတာ့ ဆြစ္ဇာလန္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမွာပါ။ ဆီမီးဖိုင္နယ္မွာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ-အီတလီပြဲက ႏိုင္တဲ့အသင္းနဲ႔ စပိန္-ဆြစ္ဇာလန္ပြဲက ႏိုင္တဲ့အသင္းဆုံေတြ႕မွာျဖစ္လို႔ ခ်န္ပီယံေဟာင္းေတြျဖစ္တဲ့ အီတလီနဲ႔စပိန္ႏွစ္သင္းထဲက တစ္သင္းကေတာ့ေသခ်ာေပါက္ ၿပိဳင္ပြဲကထြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ကံဆိုးရင္ ႏွစ္သင္းစလုံးထြက္သြားရမယ့္အေျခအေနရွိပါတယ္။
ဒီဘက္လမ္းေၾကာင္းမွာေတာ့ ခ်န္ပီယံျဖစ္ဖူးတာက ယူ႐ို-၉၂ ခ်န္ပီယံဒိန္းမတ္တစ္သင္းသာရွိၿပီး က်န္တဲ့အသင္းေတြထဲမွာ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားဆုံးဆိုလို႔ ခ်က္တစ္သင္းသာရွိပါတယ္။ ခ်က္အသင္းဟာ အရင္ ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီးယားနာမည္နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့စဥ္က ၁၉၇၆ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲခဲ့ဖူးၿပီး အခု ခ်က္အသင္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့ခ်ိန္မွာ တစ္ခါမွ ဗိုလ္မစြဲခဲ့သလို အျမင့္ဆုံးက ယူ႐ို-၉၆ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္လုပြဲအဆင့္အထိတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဂၤလန္အသင္းကေတာ့ ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ တစ္ခါမွေတာင္ ဗိုလ္လုပြဲမတက္ဖူးေသးပါဘူး။ ယူကရိန္းဆိုရင္လည္း အသင္းသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အခုမွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ကြာတားတက္ခဲ့တာပါ။ တကယ္လို႔ ယူ႐ိုခ်န္ပီယံေဟာင္းအသင္းစာရင္းမွာ ခ်က္အသင္းကို ထည့္တြက္ရင္ေတာင္ ဒိန္းမတ္နဲ႔ခ်က္အသင္းတို႔ ကြာတားဖိုင္နယ္မွာ ဆုံေတြ႕ေနလို႔ တစ္သင္းေတာ့ ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲကို ေသခ်ာေပါက္လက္ျပႏႈတ္ဆက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္မွာ အဂၤလန္နဲ႔ ဆုံေတြ႕ဖို႔မ်ားေနပါတယ္။
ယူ႐ို-၂၀၂၀ ဆီမီးဖိုင္နယ္နဲ႔ ဗိုလ္လုပြဲေတြကို ဝင္ဘေလကြင္းမွာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အဂၤလန္အသင္းကေတာ့ ဗိုလ္လုပြဲသြားရာလမ္းေၾကာင္း ေခ်ာင္ေနတဲ့အတြက္ ခ်က္နဲ႔ဒိန္းမတ္တို႔ထဲက ဘယ္အသင္းတက္တက္ အဂၤလန္အတြက္ သိပ္မခက္ခဲပါဘူး။ လမ္းေၾကာင္းအေနအထားအရ ဗိုလ္လုပြဲမွာ ခ်န္ပီယံေဟာင္းႏွစ္သင္းထိပ္တိုက္ေတြ႕ဖို႔က ရာႏႈန္းနည္းပါးေနၿပီး ခ်န္ပီယံေဟာင္းတစ္သင္းနဲ႔ ခ်န္ပီယံမျဖစ္ဖူးေသးတဲ့ တစ္သင္းဆုံေတြ႕မယ့္အေျခအေနပိုမ်ားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ယူ႐ို-၂၀၂၀ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ခ်န္ပီယံအသင္းသစ္ေပၚထြက္လာမလား . .ဒါမွမဟုတ္ ခ်န္ပီယံေဟာင္းေတြထဲက တစ္သင္းပဲဗိုလ္စြဲမလားဆိုတာ ရင္ခုန္စြာနဲ႔ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲျဖစ္ပါေတာ့တယ္ . . .
၅၅ နှစ်အတွင်း ဂျာမနီကို ငိုကြွေးစေနိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲကထူးခြားချက်များ